Canadanepal.net: सपिङ्ग गर्न बजार गएका दिदि भाइ बिवाह गरि उतै बाट भागेपछि आमा, बहिनि रुँदै मिडियामा
सपिङ्ग गर्न बजार गएका दिदि भाइ बिवाह गरि उतै बाट भागेपछि आमा, बहिनि रुँदै मिडियामा
बाँकेको बैजनाथ ५ को बनकटुवामा यतिबेला सुन्नै नसकिने र कसैले पनि सोंच्नै नसकिने भयानक घटना घटेको छ । जहाँ आफ्नै दुई दाजुभाईका १३ दिने जुठो लाग्ने दुई दिदीभाईले बिबाह गरेका छन् । दिदीभाई बीचपनि वर्षौंदेखि माया प्रेमको सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा भारतमा बस्दै आएका देवेन्द्रले आजभन्दा १० दिनअघि मात्र नेपाल आएर दिदी खेमसरालाई भगाएपछि मात्र परिवार र सबै आफन्तलाई थाहा भएको हो । यो कुरा थाहा भएपछि यतिबेला देवेन्द्र र खेमसरा दुवैको परिवारमा तनावको वातावरण श्रृजना भएको छ । यसका साथै उनीहरुका आफन्तसंगै पुरै गाउँ नै अचम्मित बनिरहेको छ । यो समाचारलाई फ्लो गरि रहँदा एउटा अर्को कुरा पनि बाहीरिएको छ । त्यो के हो भने आफ्नै दिदीलाई र भाईलाई भगाएर विबाह गराउनमा आफ्नै घरकी अर्की छोरीको हात रहेछ भन्ने कुराले घटनाले झनै नयाँ मोड लिएको छ । यो कुराको सुईँको पाएपछि यतिबेला भाईसंग भागेर जाने खेमसराकी बहीनी पारुलाई घरका अन्य सदस्यले घरबाट निस्किएर जान भन्दै द’बाब दिईरहेका छन् । तर आफुले दिदी र भाईलाई भगाउनमा कुनै पनि प्रकारको भूमिका नखेलेको भन्दै यो कुरा साँचो नभएको पारु बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘दिदी भाई भ’नाभ’न गरी बोल्थे । के दिदी भाई बोल्दा कसैले शंका गर्छ र ? पक्कै पनि कसैले गदैनन् । र मैले पनि गरिन् । तर उनीहरु भाग्ने दिन दिदीले मलाई कोहलपुर हिन काम छ भनेको हुनाले म दिदीसंग साथी गई दिएकी थिएँ । तर मलाई के थाहा उनीहरु भाग्दैछन् भन्ने कुरा ।’ पारुले यो कुरा आफुलाई बुवाआमा र काकाकाकीले घर छोडेर जान भनेपछि मिडियामा रुँदै बताएकी हन् । उनी अगाडी भन्छिन्,‘मैले भाई बसमा चढेपछि दिदी पनि चढ्नु भयो मैले काहाँ जान लाग्नु भएको तर झर्नु भन्दा आफुहरु भा’गेर विबाह गर्न जान लागेको बताए । त्यसपछि मैले झर्नु, के भनेको यस्तो भनेर दुवैलाई गाडीबाट झारेपछि भाईले मैले खेमसरालाई लैजान पाईन भने यही गाडीको पां’ग्रा’मा च्या’पि’ए’र म’र्छु भन्दै ध’म्क्या’यो । दिदीले पनि मलाई तँ घर जा भन्दै गाडी चढी ।’ दिदीको साथी भएर कोहलपुर जानु नै आफ्नो गल्ती भएको पारु बताउँछिन् । यसै क्रममा उनीहरु दाजुभाईका छोराछोरी हुन् । हाड नाता एउटै भएका र मर्दापनि १३ दिने जुठो लाग्ने यी दिदी भाईबी प्रेम सम्बन्ध निकै लामो समयदेखि रहेछ । भाई देवेन्द्र भारतमा बस्ने भएपनि उनले नेपालमा बसेकी आफ्नै ठूलो बुवाकी छोरीसंग उतैबाट प्रेम गरिरहेका रहेछन् । उनीहरुबीच प्रेम छ भन्ने कुरा त अहिले देवेन्द्र नेपाल आएर आफ्नै दिदी खेमसरालाई भगाएर लगेपछि परिवार र आफन्तलाई थाहा भएको हो । देवेन्द्र नेपाल आएर पनि आफ्नो घरमा नबसेर दिदी बसेकै घरमा बसिरहे । त्यति हुँदापनि उनीहरुबीचको अ’नैति’क प्रे’म स’म्बन्ध’को बारेमा दुवै परिवारलाई थाहा नै नभएको परिवारका सदस्यहरु बताउँछन् । उनीहरुको भनाईमा देवेन्द्र खेमसराको घरमा बसेपनि आफ्नै काकाको घर त हो नि भन्ने भएको रहेछ । एउटै घरका छोराछोरीको यस्तो अ’नै’ति’क स’म्ब’न्ध होला यो कसैले पनि पत्याउनै नसक्ने कुरा हो । देवेन्द्र र खेमसराको परिवारलाई पनि यस्तै भईदियो । आफ्नै छोरीले देवरको छोरासंग भागेर गएको कुरालाई खेमसराकी आमा मिडियामा रुँदै भन्छिन्,‘गाउँ समाजमा मुख नै देखाउन नहुने बनाए । माईत तिरबाट आफ्नै बहीनीको छोरा घरतिरबाट आफ्नै देवरको छोरा । यीनीहरु आफ्नै दुईभाई दुईबहीनी हुन् । के गरे यस्तो ? सुन्ने नसकिने र भन्नै पनि सजिलै नसकिने के गरे गरे यस्तो । साह्रै लाज भयो बाबु’